Asombola - Wikipedia
Ny Asombola no vintana fahenina amin' ny fanandroana malagasy. Ny Alahasaty no eo alohany ary ny Adimizana no manaraka azy. Ny tapany andrefana amin' ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy.
1.2 Ny antokon-kintana Virijiny sy ny zôdiaka
2 Ny vintana Asombola
2.2.1 Vava Asombola
2.2.2 Vody Asombola
3 Ny volana Asombola
Avy amin' ny anaran' antokon-kintan'ny zôdiaka amin' ny teny arabo hoe السنبلة / As-Sumbul ("virjina") ny hoe Asombola.
Manondro ny antokon-kintana atao amin' ny teny latina sy anglisy hoe Virgo na amin' ny teny frantsay hoe Vierge izy. Amin' ny teny maley dia atao hoe Sunbulat na Sumbulat na Perawan ihany koa izy.
Ny antokon-kintana Virijiny sy ny zôdiaka[hanova | hanova ny fango]
Ny fotoana andalovan' ny masoandro eo amin' ny antokon-kintan' ny Virijiny dia manomboka amin' ny 16 Septambra ka miafara amin'n y 30 Oktobra. Ny fari-potoan' ny Virijiny araka ny zôdiakan-kintana (frantsay: zodiaque sideral) dia hatramin' ny 16 Septambra ka hatramin' ny 15 Oktobra. Ny Virijiny ao amin' ny zôdiakam-panandroana mahazatra (zôdiaka mikisaka; frantsay: zodiaque tropical) dia manomboka amin' ny 23 Septambra ka miafara amin' ny 22 Oktobra. Tsy mifanaraka amin' ireo ny fanandroana malagasy noho izy miandry tsinam-bolana.
Liona na Alahasaty Viriijny na Asombola Mizana na Adimizana
Antokon-kintana 10 Aogositra - 16 Septambra 16 Septambra - 30 Oktobra 30 Oktobra - 20 Novambra
Zodiakan-kintana 16 Aogositra - 15 Septambra 16 Septambra - 15 Oktobra 16 Oktobra - 15 Novambra
Zodiaka mikisaka 23 Jolay - 22 Aogositra 23 Aogositra - 22 Septambra 23 Septambra - 22 Oktobra
Ny vintana Asombola[hanova | hanova ny fango]
Ao amin' ny fanandroana malagasy dia vintana fahenina ny Asombola ka ny tapany andrefana amin' ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Mifandratra amin' ny Alohotsy sy miarina eo amin' ny Alahamady ny vintana Asombola. Baben' ny renivintana Adimizana ny zanabintana Asombola. Ao amin' ny fitetezana andro dia mitondra tonon' andro roa ny Asombola, dia ny vava Asombola (na vavan' Asombola) sy ny vody Asombola (na vodin' Asombola). Zanabintana ny Asombola.
Araka ny finoan-drazana malagasy dia vintam-bola sy vintan' ny olona tia harena ny Asombola.
Vava Asombola[hanova | hanova ny fango]
Vody Asombola[hanova | hanova ny fango]
Ny volana Asombola[hanova | hanova ny fango]
Misy amin'ny Malagasy ny mandray ny volana Asombola ho volana fahenina amin'ny taona ao amin'ny tetiandro malagasy (raha ny Alahamady no ataony volana voalohany).
Manomboka amin' ny vava Asombola ka miafara amin' ny vody Alahasaty ny volana Asombola raha misy 28 andro. Raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian' ny vody Alahasaty dia miafara amin' ny vava Asombola ny volana izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian' io vava Asombola io dia mifarana amin' ny vody Asombola ny volana izay misy 30 andro.
↑ "Asombola", ao amin'ny Rakibolana malagasy sy Rakipahalalàna momba an'i Madagasikara.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Asombola&oldid=1011397"
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2021 amin'ny 11:06 ity pejy ity.